Umkhiqizi kanye nomhlinzeki we-Wholesale Express | Ngesikhathi
I-International expression ingenye yengxenye ebaluleke kakhulu yezohwebo zomhlaba wonke. Kwabaningi abathengisi be-eBay / AliExpress / Shopiy ukuhambisa imikhiqizo yabo kunoma yiliphi izwe. Ububanzi obukhulu bezinsizakalo ...
I-International Express ingenye yengxenye ebaluleke kakhulu yezohwebo zomhlaba wonke. Kwabaningi abathengisi be-eBay / AliExpress / Shopiy ukuhambisa imikhiqizo yabo kunoma yiliphi izwe. Ububanzi obukhulu bezinsizakalo eziphakanyiswe yi-Guangzhou Ontime zikunikeza izinketho eziningi ezahlukahlukene zokuthunyelwa kwempahla yakho yokuthutha. Ngaphandle kokuthuthwa kwempahla yasolwandle nasolwandle, kuye kwasungulwa insizakalo yezokuthutha ebhekiswe ngqo kulokho okulindele nasezidingweni zakho ngokushesha okukhulu. Isevisi yokuvezwa inikeza ezinsukwini zokugcina ezisheshayo nezisebenza kahle phakathi kweChina nezwe elikhethiwe. Iposi, elaziwa nangokuthi «ukulethwa okuvezwa», limele insizakalo «yendlu ngendlu» lapho inkampani yokulethwa izosusa izimpahla zakho ekhelini lokuthathwa okuvunyelwene ngalo (imvamisa umphakeli wakho noma umhlanganisi ezweni lakho lokuzalwa) futhi uzothumela mpahla yakho ekhelini lokulethwa (lapho uhlala khona noma ekhelini leklayenti ngokwesibonelo).
Njengengxenye yalokhu kudilivwa, amaqembu aphethe asingatha zonke izinyathelo ezidingekayo zohambo lwezimpahla ukusuka endaweni A kuya ephoyinti B, okuyilezi: ukususwa, ukuthuthwa / ukuthuthwa kwempahla, imvume yamasiko lapho kuqala khona nalapho kugcinwa khona, ukukhokhwa kwemali imisebenzi yamasiko kodwa nayo yonke imisebenzi yokuphatha edingekayo. Ngenxa yobudlelwano obuqinile nobudlelwano obugcinwe nezinkampani ezibaluleke kakhulu zokulethwa (i-DHL, i-FedEx, i-UPS ne-TNT),Isikhathi sokusebenza se-Guangzhou iqinisekisa imikhankaso esheshayo nethembekile "yendlu ngendlu" phakathi kweChina nezwe elikhethiwe. Uma uthumela nge-GZ Ontime - uthumela nabachwepheshe bokuthunyelwa kwamazwe omhlaba kanye nezinsizakalo zokulethwa kweposi! Ngezinsiza zethu ezahlukahlukene zamaphasela we-parcel namaphakheji, kanye nezixazululo zokuthumela nezokulandela umkhondo ukuze zivumelane nezidingo zakho - funda ukuthi i-GZ Ontime ingaletha kanjani!
1. I-DHL yasungulwa ngonyaka we-1969, manje i-DHL iyinkampani ehamba phambili yezimpahla emhlabeni. I-DHL iyiqembu lomhlaba wonke labasebenzi abangaphezu kwezi-380,000 bokuthumela, abahlanganiswe wuthando lwezinto zokusebenza. Futhi i-DHL isebenza endaweni eyingqayizivele. I-DHL iyinto entsha njengokuqalisa, ngamandla enhlangano yomhlaba wonke. I-DHL izohlinzeka ngosizo lokuhambisa oluhamba phambili, futhi banekhono elinamandla kakhulu lokususa amasiko. Kuzoba ezisheshayo, kubiza kuphela izinsuku zokusebenza ezi-3 ~ 5.
2. I-FedEx / TNT FedEx Express ihlanganisa wonke amakheli omgwaqo wase-US kanye nezinsizakalo ezingaphezu kwamazwe nezindawo ezingama-220. Inethiwekhi yethu yomhlaba wonke ihlinzeka insizakalo ezwela ngesikhathi, yomoya emoyeni ngokusebenzisa izikhumulo zezindiza ezingaphezu kuka-650 emhlabeni jikelele.
3. I-UPS Ikhasimende Kuqala. Abantu Led. Ukuqamba Okuqhutshwa. Indaba ye-UPS, inkampani enkulu kunazo zonke yokulethwa kwamaphakeji, iqale ngaphezu kweminyaka eyikhulu edlule ngemalimboleko engu- $ 100 yokuqalisa isevisi encane yezithunywa. Ukuthi siguquke kanjani saba yinhlangano yomhlaba wonke eyizigidigidi zamarandi kukhombisa umlando wezokuthutha zanamuhla, ezentengiselwano zamazwe omhlaba, ukuhanjiswa kwempahla kanye nezinsizakalo zezezimali. Namuhla, i-UPS ikhasimende kuqala, ukuholwa kwabantu, ukuqhutshwa kwemisha. Inikwe amandla ngabasebenzi abangaphezu kuka-495,000 abaxhumanisa izizwe nezindawo ezingaphezu kwezingu-220 ezinqamula imigwaqo, ujantshi, umoya nolwandle. Kusasa, i-UPS izoqhubeka nokuhola imboni futhi ixhume umhlaba, ngokuzibophezela ekusetshenzisweni kwekhwalithi kanye nokusimama kwemvelo.
4. I-Aramex i-Aramex isikhule ngokushesha yaba uphawu lomhlaba jikelele, olwaziwayo ngezinsizakalo zalo ezenziwe ngezifiso nemikhiqizo emisha. Kubhalwe ku-Dubai Financial Market (DFM) futhi ezinze e-UAE, i-Aramex isendaweni eyodwa ezimpambanweni zomgwaqo phakathi kweMpumalanga neNtshonalanga, esivumela ukuthi sinikeze izixazululo zezinto ezenzelwe wena noma kuphi emhlabeni futhi sifinyelele amabhizinisi nabathengi abaningi esifundeni nasemhlabeni jikelele. Sizibophezele ekuqhubekeni sithuthukisa imisebenzi yethu esifundeni sonke ngenkathi siphishekela amathuba okukhula kwamabhizinisi ezimakethe ezisafufusa phesheya. Le ndlela ingumgogodla ekuthuthukisweni okusimeme kwebhizinisi lethu kanye nokuzibophezela ekusizeni ukuhweba okubanzi, komhlaba wonke ezweni eliguqukayo njalo.
Umugqa ozinikezele. Ngaphezu kwakho konke, sinikeze nenani elingcono kakhulu lomnyango wendlu ngendlu. Ngokusebenzisana nemithombo esitebeleni yokuthwala izindiza yaseHongkong kanye nezinkampani ezihola umhlaba wonke emazweni aseYurophu nase-US, i-GZ Ontime Direct Line iyinhlanganisela yesevisi yokuveza kanye neposi kumodi ye-DDP (Declare Duty Paid). Sisebenzisa indiza eqonde ngqo isuka eHongkong iya esangweni lokuya khona nsuku zonke futhi sibamba usuku olufanayo lwamasiko. Kulawulo oluphelele ngo-100% ezindizeni ezithwala umoya kanti ukulethwa kwemayela lokugcina kuyatholakala okuyisixazululo sezomnotho ngokulethwa okusheshayo okuklanyelwe ikakhulukazi amaphakheji we-e-commerce.Kodwa ayihlanganisi umhlaba wonke. Ikhotheshini ngokuvamile kuzoba yi-5 ~ 7USD / KG kuphela. Ngalesi sikhathi, sinale nsizakalo ekhethekile yeMalaysia, i-USA, neYurophu. Kepha uma udinga imininingwane eyengeziwe ngakho, ngicela ungithinte, ukuze sikwazi ukukunikeza insizakalo ekufanele kakhulu.
Langaphambilini Idumela Elihle Lomsebenzisi Lokudlulisela Phambili I-Shanghai USA UK Thailand I-DHL Izindleko Zeminyango Izindleko Ezishibhile Ezindleko I-Agent China Air Freight Cargo Shipping Agent eYurophu
Olandelayo: Ukuthengiswa kwe-Express wholesale Express (DHL UPS FedEx TNT) okuvela eChina kuya kwa-Israyeli